81 qof oo ku dhimatay rabshado ka dhacay Addis Ababa kadib dilkii Fanaan caan ka ahaa dalkaas | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Addis Ababa(SONNA)-Uga yaraan 81 qof ayaa ku dhintay rabshada labadii beri ee la soo dhaafay ka dhacay magaalada caasimada u ah Itoobiya ee Addis Ababa kadib caro ka dhalatay dilka fanaan caan ahaa oo ka soo jeeday Qowmiyada Oromada oo ah tan uga tirada dalkaas.
Fanaanka oo lagu magacaabi jiray Hachalu Hundessa ayaa heesihiisa dhanka siyaasada waxa ay cod siiyeen Oromada, waxaana la dilay habeenkii Isniinta ee todobaadkan.
Mudaharaadyo rabshado wata ayaa ka qarxay magaalada Addis Ababa iyo gobalka Oromiya ee u dhaw caasimada ahna xudunta dadka Oromada oo muda dheer ka caban jiray sida xun ee ay ula dhaqmi jireen maamuladii hore, iyada oo dadka dalkaasi uu yahay 100 milyan.
“Inta la oghay 81 ruux ayaa la dilay oo 3 kamida ay yihiin xubno Police-ka gaarka ah ee Oromiya”, Taliyaha Police-ka Oromiya, Ararsa Merdasa ayaa war Telefishanka laga sii daayey ku sheegay.
Shalay oo Arbaco ahayd ayaa waxa ay rabshadaha uga xumaa ka dhaceen magaalada uu ka soo jeedo fanaanka ee la yiraahdo Ambo oo ku taala galbeedka magaalada caasimada Itoobiya ee Addis Ababa sida ay ku soo warameyso wakaaladda Wararka ee AFP.
Previous articleMadaxweyne Erdogan oo sheegay in la xakameyn doono Baraha bulshada ay ku xiriirto ee dalka Turkiga
Next articleWasaaradda Caafimaadka Soomaaliland oo heshay kiisas cusub oo la xiriira Covid 19